Semalt - ကမ္ဘာ့ကျော်ကြားသောဒီဂျစ်တယ်အေဂျင်စီ
Semalt သည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Search Engine Optimization နှင့် Website Analytics ကိုအထူးပြုသည့်ဒီဂျစ်တယ်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်နှိပ်လိုက်သည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ဂရုတစိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောအကြောင်းအရာများ၊ လုပ်ဆောင်မှုများသို့တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အရောင်အရောင်အသုံးပြုမှုတို့ဖြင့်အွန်လိုင်းအာရုံကိုမည်သို့ဆွဲဆောင်ရမည်ကိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဘာသာစကားများစွာကိုကျွမ်းကျင်စွာကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ Semalt သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှရာနှင့်ချီသောအကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များနှင့်ရလဒ်များကိုအဘယ်ကြောင့်တွေ့မြင်ရသနည်း။ အိုး Turbo Turtle ကိုဟိုင်းလို့ပြောဖို့မေ့လို့မရဘူး!
သူတို့အထုပ်ထဲကိုမ ၀ င်ခင်သူတို့လုပ်သမျှအားလုံးကိုဖျက်ကြရအောင်။
Search Engine Optimization (SEO ဟုလည်းခေါ်သည်) သည် Search Engine ပေါ်တွင်သင်၏စာမျက်နှာမြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကိုတက်ကြွစွာတိုးပွားစေသည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်တွင်ပေါ်လာရန်သင်၏စာမျက်နှာကိုအညွှန်းထားရန်လိုအပ်သည်။ Indexing ဆိုသည်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Spider (Bot (သို့) Crawler ဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ဒေတာဘေ့စ်အတွင်းရှိအရာအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်မှုအတွက်အကြောင်းအရာများကိုစုစည်းနိုင်သည်။ Spider တစ်ယောက်သင့်စာမျက်နှာကိုရှာရန်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစူးစမ်းနေစဉ်သင်၏ link ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို Backlinking ဟုခေါ်သည်။
Spider ကသင့်ရဲ့စာမျက်နှာကိုတွေ့ပြီဆိုပါစို့၊ သင့်ဆိုဒ်မှ Backlink နှင့်ချိတ်ဆက်သည်အထိသူသည်ရှာဖွေနိုင်သမျှသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းပေးလိမ့်မည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုသင့်ရမှတ်ရမှတ်ကိုပေးလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ SERP (ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများ) နေရာချထားမှုကိုကူညီနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏စာမျက်နှာကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည့်အခါအောက်ပါအချက်များကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ - အသုံးပြုသူကသင်၏အကြောင်းအရာကိုဖတ်နိုင်သလား။
ပါဝင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်မှု - သင်၏အကြောင်းအရာသည်ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။
ခန္ဓာကိုယ်စာသား - ရှာဖွေမှုအသုံးအနှုန်းနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာသည်မည်မျှနီးကပ်သနည်း။
စာမျက်နှာခေါင်းစဉ် - ဆောင်းပါးရဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲ။
ပုံများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များ - ရုပ်ပုံများသည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုအထောက်အကူပြုသလား။
တည်နေရာ။ ။ သင်၏တည်နေရာတည်နေရာပေါ်တွင်မူတည်ပါသလား။
သင်၏ SEO အားလုံးသည်စနစ်တကျစီတန်းပြီးပါကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များပုံမှန်စီးဆင်းသင့်သည်။ သို့သော်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သည်၎င်း၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ထံရောက်ရှိနေပြီဟုအကန့်အသတ်မရှိမည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။ ဒါကိုသာမကပဲပရိသတ်ကသင်လိုချင်တဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းတုံ့ပြန်မှုရှိမရှိသင်ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။ သေချာတာပေါ့, ငါတို့အစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့အရောင်းအစီရင်ခံစာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြောင်း၏စီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အရောင်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရသင်မည်မျှ ၀ င်ငွေရရှိခဲ့ကြောင်းပြောပြသည်။ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖောက်သည်တစ် ဦး မည်သို့တုံ့ပြန်နေသည်ကိုသင်အမှန်တကယ်နားလည်လိုလျှင် Web Analytics အစီအစဉ်သို့နက်နက်နဲနဲလေ့လာရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဝဘ်ဆိုက်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမှန်ကန်စွာတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ပရိသတ်များ၏အလေ့အကျင့်များကိုနားလည်လိုသောဆန္ဒဖြင့်အစီရင်ခံစာများကိုတိုင်းတာရန်၊ စုဆောင်းရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အသုံးပြုသည်။ ဤပရိုဂရမ်များသည်သင့်အားအောက်ပါအချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအဓိကအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။
ဒါကမှတဆင့်ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါရန်သတင်းအချက်အလက်အများကြီးပါ! သင်၏ဝဘ်ဆိုက်တည်ရှိမှုကိုအပြည့်အဝတိုးတက်အောင်ကူညီပေးသည့်အတွက်၎င်းကိုရရှိရန်အရေးကြီးသည်။ Web Analytics နှင့်အတူ၊ အောက်ပါတို့အတွက်တိကျသောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။
သင်၏လူ ဦး ရေစာရင်းနှင့်ကိုက်ညီသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးပါ။
ဤအရာအားလုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းသင်၏စီးပွားရေးကိုအပြည့်အဝအရှိန်မြှင့်ရန်အချိန်ယူရမည်။ အမှန်တကယ်ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့သင်အမှန်တကယ်ဖောက်သည်များထက် ၀ ယ်သူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လူများနိုင်သမျှများများဆွဲဆောင်ရန်သင်၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုရှေ့ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Semalt ကိုငှားရမ်းသင့်သည်။
သူတို့၏အမှုများကိုစာမျက်နှာတွင် ကြည့်ပါက ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကုမ္ပဏီရာနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများအားအမြတ်အစွန်းရရှိရန်လိုအပ်သောကလစ် နှိပ်၍ ရသောကိန်းဂဏန်းများကိုရရှိစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အမှုတစ်ခုစီတွင်အောက်ပါသို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ငါအထက်တွင်တင်ပြခဲ့သောဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Semalt သည်ဤကုမ္ပဏီများကိုလစဉ်အသုံးပြုသူ ၁၁၄ ဦး မှသုံးစွဲသူ ၁,၇၇၁ ယောက်အထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သည့်သုံးစွဲသူအရေအတွက်၏ ၁၅ ဆဖြစ်သည်။ ၀ ယ်သူသည်သူတို့၏ရလာဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ပြောခဲ့သည်။
ရေးသားထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ခက်ခဲသည့်နံပါတ်များမလုံလောက်ပါက Semalt တွင်ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောစာမျက်နှာလည်းရှိသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိကျေနပ်ရောင့်ရဲသောဖောက်သည်များထံမှလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီတော့ Semalt ကဘယ်လိုမျိုးရလဒ်တွေတူတူရနိုင်မလဲ။ သင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်နိုင်သောအရာမှာ surgerytr.com မှ Yavuz ၏စမ်းသပ်မှုကမ်းလှမ်းချက်အားရယူခြင်းဖြစ်သည်။ Semalt.com ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုချက်ချင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမယ့်ဘားတစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဤအစီရင်ခံစာကိုကြည့်နိုင်ရန်သင်လုပ်ရန်မှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည်သင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိရလဒ်များကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြပြီးထိုရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ပေးမည့်အထုပ်ကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ထို package များတွင် AutoSEO , FullSEO နှင့် Analytics တို့ပါဝင်သည်။
AutoSEO သည်သင့်အားအောက်ပါကိရိယာများကိုပေးသည် -
Web Analytics မှအစီရင်ခံစာများ
ဤရွေ့ကားအောင်မြင်သော SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်ရန်လိုအပ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်! သငျသညျသှားစဉျအခါ SEO လေ့လာသင်ယူနေရင်တောင်, Auto SEO အထုပ်ထဲမှာသင်ရရှိနိုင် tools တွေကိုသင်၏ website တွင်လျှောက်ထားရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည် Semalt ကမ်းလှမ်းမှုများကိုအသက်သာဆုံး၊ အမြန်နှင့်ထိရောက်သော package ဖြစ်သည်။
၉၉ ဆင့်အတွက် ၁၄ ရက်ကြာစစ်ဆေးမှုကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက်၊ သင်သည်အောက်ပါစျေးနှုန်းများအတွက်လစဉ်အစုအဝေးများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
$ 99 များအတွက် 1 လ
$ 2673လ
$ 504 များအတွက်6လ
$ 891 များအတွက် 1 နှစ်
FullSEO အထုပ်တွင် Semalt ၏အောင်မြင်သောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ရှိသည်။
ဤအစီအစဉ်ဖြင့် Semalt ၏ရည်မှန်းချက်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို SERP ၏ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်တစ် ဦး သည်သင်၏စာမျက်နှာကိုတာ ၀ န်ပေးအပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏စာမျက်နှာကိုအလွန်အောင်မြင်စွာဖြစ်စေရန်သူတို့ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များအားလုံးကိုအသုံးချနိုင်သည်။ သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် surgerytr.com နှင့်အမျှသူတို့သည်စာမျက်နှာသို့ချက်ချင်း ဝင်ရောက်၍ သူတို့၏မှော်အတတ်ကိုချက်ချင်းစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပညာရှင်တွေအကြောင်းနည်းနည်းလောက်သိချင်ရင်၊ သူတို့ရဲ့ပုံတွေကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးမှာရှာတွေ့နိုင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Yana Shafarenko (SEO Expert) နှင့် Natalia Khachaturyan (Content Strategist) သည် Semalt ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ရှေ့စာမျက်နှာတွင်“ သင်၏အဆင့်အတန်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်” ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အောက်တွင် Semalt အတွက်အလုပ်လုပ်စဉ်အောင်မြင်ခဲ့သောအောင်မြင်မှုများစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအတော်များများလည်း Semalt ရဲ့ဘလော့ဂ်အတွက်ဆောင်းပါးများရေးသားနေကြသည်။ Vladislav Polikevych (Copywriter)၊ Olga Pyrozhenko (စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ) နှင့် Eugene Serbin (SEO ၏ဌာနမှူး) သည်လက်ရှိ SEO ပြောင်းလဲမှုများနှင့်သင်၏စျေးကွက်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးဆောင်းပါးများစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။ ပြီးတော့ငါသူတို့မှာစာမျက်နှာ ၂၆ မျက်နှာပါတဲ့ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးတွေပါတဲ့။ စာမျက်နှာတစ်ခုစီတွင်ဆောင်းပါး ၅ ခုနှင့်နောက်ဆုံးဆောင်းပါးနှစ်ခုပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်စုစုပေါင်းဆောင်းပါး ၁၂၇ ခု (ယခုအချိန်အထိ) အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။ သူတို့ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များနှင့်သူတို့ဘလော့ဂ်တွင်သူတို့အခမဲ့ပေးသောဆောင်းပါးများအကြားတွင် Semalt ၏အပြည့်အဝ SEO ၀ န်ဆောင်မှုအထုပ်ကို ၀ ယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီသင်၌ကိုးကားနိုင်သောရင်းမြစ်များများစွာရှိသည်။
အပြည့်အဝ SEO SEO အထုပ်သည်ဖောက်သည်များအကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်အောင်မြင်သောလှုပ်ရှားမှုများသည် Semalt ၏အပြည့်အဝ SEO SEO အထုပ်သည်မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုဖော်ပြနေသည်။ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းရန်သင်စာရင်းသွင်းလျှင်၎င်းတို့သည်အထူးလျှော့စျေးပေးသည်။
၃ လတွင် ၁၀% လျှော့စျေး
6 လ 15% ချွတ်ပေးပါ
၁၂ လသည် ၂၅% လျှော့ပေးသည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Semalt ၏ Web Analytics package တွင်အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။
On-page optimization အခွင့်အလမ်းများကိုသတ်မှတ်ပါ
သင်၏အလုပ်အားလုံးကသင့်ကိုအောင်မြင်မှုသို့ ဦး တည်စေမလားသို့မဟုတ်သင်၌လုပ်စရာများများရှိသလားဟုထုတ်ဖော်ပြသသည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤဗဟုသုတမရှိပါကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို SERP ၏ထိပ်သို့ပို့ဆောင်။ မရပါ၊ အသိပညာသည်စွမ်းအားဖြစ်သည်။ ထိုပါဝါဖြင့်သင်သည်အောက်ပါတို့မှအချို့ကိုလုပ်နိုင်သည်။
စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍၊ သူတို့သည်သော့ချက်စာလုံးနှင့်အထုပ်အကန့်အသတ်ရှိသော package များကိုပေးသည်။ သူတို့ကဒီလိုပဲ
သော့ချက်စာလုံး ၃၀၀၊ စီမံကိန်း ၃ ခုနှင့်ရာထူးသမိုင်း ၃ လအတွက်ဒေါ်လာ ၆၉ / လ
သော့ချက်စာလုံး ၁၀၀၀ အတွက်ဒေါ်လာ ၉၉ / လ၊ စီမံကိန်း ၁၀ ခုနှင့်ရာထူးသမိုင်း ၁ နှစ်
ဒေါ်လာ ၂၄၉ / လအတွက်သော့ချက်စကားလုံး ၁၀၀၀၀ အတွက်၊ အကန့်အသတ်မဲ့စီမံကိန်းများနှင့်အကန့်အသတ်မဲ့ရာထူးသမိုင်း
အကယ်၍ သင်သည်လပေါင်းများစွာ sign up လုပ်လျှင်အောက်ပါတို့ကိုသိမ်းနိုင်သည်။
Semalt သည်သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြသောအပြုသဘောဆောင်သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ၊ သူတို့၏အောင်မြင်သောဘာသာဗေဒပညာရှင်များမှပိုင်ဆိုင်သည့်ဘလော့ဂ်များနှင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများနှင့်သူတို့၏တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများအကြားတွင် Semalt သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဒီဂျစ်တယ်အေဂျင်စီများအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရုံမျှဖြင့်သူတို့သည် SEO နှင့် Analytics အတွက်သူတို့လုပ်နေတာတွေကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်